သိန္း 200 ႏွင့္ေအာက္ သာကေတမြို့နယ်ရှိရောင်းရန်အိမ်ခြံမြေများ
သာကေတမြို့နယ်၊ မင်းနန္ဒအိမ်ရာရှိ မြေကွက်ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10132824 အတွက် Yangon Mate Real Estate Company သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
🔶 သာကေတစက်မူ့ဇုန်🔶 နေရာကောင်းမြေကွက်ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10123814 အတွက် Soe Kabar Real Estate Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
💦💦 Rainy Season အထူးအစီစဉ် အိမ်ရာအရောင်းပြပွဲကြီး
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10118477 အတွက် Soe Kabar Real Estate Co.,Ltd သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သာကေတ သုဝဏ္ဏ တံတားအဆင်း min nan dar လမ်း မြေထောင့်ကွက်အမြန်ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10097715 အတွက် House Book (Myanmar) Real Estate Service Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
House Book (Myanmar) Real Estate Service Co.,Ltd. ပိတ်ရန်
သာကေတ စက်မှု့ဇုန် ရှိ စက်မှု့မြေကွက်အမြန်ရောင်းမည်။
ကြော်ငြာနံပါတ် S-10097516 အတွက် House Book (Myanmar) Real Estate Service Co.,Ltd. သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
မင်းနန္ဒာလမ်းမပေါ် (Capital အနီး) (၁၀၀ x ၁၇၀) မြေ အရောင်း
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9955531 အတွက် Aung Myay (SAYTANAR) Real Estate & General Service သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သိန်း ၃၀၀ ကျော်စပေးရုံဖြင့် River View မြင်ရမည့် condo ပိုင်ဆိုင်ခွင့်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9779922 အတွက် Vibe Genius Property သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
သိန်း ၃၀၀ ကျော်ပေးရုံဖြင့် သိန်း ၅၀၀ မှ ၈၀၀ ထိ အထူးသက်သာခွင့် ရရိှမည့် River View မြင်ရမည့် Condo Project
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9776244 အတွက် Vibe Genius Property သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်
ကြော်ငြာနံပါတ် S-9662180 အတွက် အောင်(ကုဋေကြွယ်)အိမ်ခြံမြေအကျိုးဆောင်ကုမ္ပဏီ သို့ ဆက်သွယ်ရန် ဖုန်းနံပါတ်